Azia Atsimo: Tsy fananana Asa, Fikambanan-drelijiozy, Valala, Mpangataka Mpanefoefo Ary Fandriana Fanampiny An’ireo Blaogera · Global Voices teny Malagasy
Manana bilaogy Aziatika Tatsimo marobe ho jerena isika ankehitriny
Voadika ny 30 Avrily 2019 16:51 GMT
I Azia Atsimo no faritra anisany iray amin'ireo mahantra indrindra erantany. Ny tsy fananana asa no iray amin'ireo olana goavana ho an'ireo firenena rehetra ao amin'io faritra io. Manoratra ampahany iray mikasika ny trangan-javatra eo amin'ny asa ao Azia Atsimo ny South Asia Biz. Dinihan'ny bilaogy “biz” ireo vavahadin-tserasera momba ny asa ety anaty tambajotra any Nepal, India, Bangladesh, Pakistana, ary Sri Lanka.
Manana bilaogy Aziatika Tatsimo marobe ho jerena isika ankehitriny:
Lahatsoratra iray momba ny Biswa Ijtema, fihaonan'ny Silamo erantany isantaona, eny amoron'ny reniranon'i Turag any amin'ny sisin'ny tananàn'i Dhaka, renivohitr'i Bangladesh no soratan'ny Blogger News Network,. Mpino manodidina ny telo tapitrisa no tonga nanatrika an'ireo fotoam-pivavahana famaranana tamin'io alahady io, nandeha tongotra an-kilaometatra maro ny sasany satria niato ny fifamoivoizana mba hanomezana làlana ny fandalovana. Io no fikambanan-drelijiozy miozolomana faharoa lehibe indrindra manarakaraka ny hajj.
Vahoaka niverina avy any Ijtema
Tao anatin'ny iray volana latsaka niainana tanaty tany latsaka an-katerena, nihena ireo fitohanana sy ireo korontana tao Bangladesh, tsy misy fihetsiketsehana eny andalam-be, voarindra kokoa ireo fitohanana, manana toerana azo andehanana kokoa eny amin'ny sisin-dalana natokana ho azy ny olona noho ny famotehana an'ireo fibahanan-toerana tsy ara-dalàna. Nopetahan'ny governemanta ireo “trondro vaventy” mpitarika politika nanao kolokoly ary naato ireo hetsika ara-politika feodaly. Maneho hevitra i Chhayalin fa andro vitsivitsy talohan'izao, noheverin'ireo olona fa tsy ho azo tanterahana ireo fanovàna ireo. Vitan'ny governemanta mpisolo toerana, miaraka amin'ny fanohanan'ny tafika, tao anatin'ny andro vitsivitsy ny tsy vitan'ny governemanta demokratika voafidy tao anatin'ny dimy taona. Mandritra io fotoana io, manisy feo momba ny zon‘ireo an'arivony voafonja nosamborina tsy nisy fiampangana ny Drishtipat Group Blog. Mandefa tondrozotra iray ny Bangladesh Watchdog mba hahatongavana amina fitantanana tsara ao Bangladesh.
Tena malaza be ny lalao Cricket ao Azia Atsimo. Na dia sarotra aza ny hilalao cricket any amina toerana avo, tsy manana firehetam-po amin'io lalao io i Bhutan be tendrombohitra. Natambatr'i Ugyen Dorji, avy amin'ny blaogy Bhutan cricket, ny tantara iray misy fizaràna roa mikasika ny cricket ao Bhoutan (1,2).
Tafiditra tanteraka anatin'ireo hosodoko ao Bhutan ny phallus. Ho an'ireo tsy mahalala an'io, manolotra fijerin'ny ao Bhutan ny Phallus ny tranonkala Ugeent of Kuzu Bhutan.
Alaivo sary an-tsaina ny tontolo iray feno blaogera ary atolotrao ny fandriana iray fanampiny ho an'ny blaogera iray hafa tonga mitsidika ny tanànanao. Ary ho valin'izay, rehefa mitsidika ny tanànany indray ianao, dia manana trano hipetrahana.
Mitovy amin'ny tantara foronina ve io? Tsia, mitranga ao India izany. Mampiseho ny Extra Bed i Kiruba Shankar, fitohizana tokana amin'ny asa fananganana tambajotra sosialy izay tokony ho dingana iray manandanja arahan'izao tontolo izao.
Asongadin‘i Desh of Drishtikone ny mpangataka mpanefoefo indrindra ao Mumbai, India.
Zavamisy sa foronina? Rakta Kunda, nivoaka ny boky vaovao iray mikasika ny Fandringanana tao amin'ny Lapam-panjakana ao Népal tamin'ny taona 2001 taorian'ny fandroahana ny Mpanjaka Gyanendra. Avy amin'ny mason'ny olona iray vavolombelona sy sisampaty nanatri-maso, soritan'ilay boky ireo trangan-javatra niseho, ny vehivavy mpiasa tranon'ny Mpanjakavavy Ratna, hita ao anaty boky ho Shanta. Milaza izy fa lehilahy 2 nisaron-tava an'ny Printsy Dipendra no nitifitra ka nitarika ny fandripahana. Manahy i Acorn fa mety tsy tian'ny fitantanana vaovao hivoaka ny marina.
Taoriann'ny nasionalisma Madhesi, manadihady an'izay mety hitranga ny Counterpoint Blog raha toa ka voazara i Népal.
Ny Aawab Alvi avy amin'ny All Things Pakistan mitanisa ho ohatra ny fomba mahatonga ireo blaogy (na ireo olotsotra mpanao gazety) ho lasa loharanom-baovao ho an'ireo media pakistaney mahazatra.
Manatontosa ny andiany faha-10 n'ny Moharram na Ashura, fetibe Miozolomana iray, i Light Within.